Coop digaag | December 2019
Abramovich Jr. mar dambe ma doonayso in lagu dhiso aqallada lagu koriyo Bariga Fog
Meelaha Larkspur (beeritaanka qaxwaha): waa maxay isticmaalka iyo sida loo isticmaalo geedka
Hantid, ma cafiyi kartid! "Bixiye" micnaheedu waa baranbaro leh tilmaamo
Eggplant waa khudaar aad u fiican oo caafimaad leh, si kastaba ha ahaatee, si ay u helaan badeecad kama dambeys ah oo la aqbali karo, waxay qaadataa dadaal badan, maadaama dalaggu uu yahay mid aad u awood badan. Sida kaliya ee lagu heli karo eggplant goosashada fiican - geedo sii kordhaya. Waxaad ka iibsan kartaa dukaanka beerta ee gaarka ah, ama waxaad ku daali kartaa inaad koraan geedo geedo ah guriga. Read More
Bedelkii farmaajada ee ku yaala xaafadaha waawayn ee baayacmushtarka Ukraine, ayaa si aan caadi ahayn u caan ah.
Sida loo daweeyo dhagaxyada caanaha ee lo'da